Sweden ayaa dooneysa wiil dhalinyaro ah in ay ku celiso Soomaaliya ka dib markii loo diiday sharciga degenaanshaha dalka. Wiilkaan oo hada ku xiran xabsi ku yaala magaalada Flen ayay Sweden u sheegtay in ay ku celinayaan Soomaaliya ayagoo geeynaya ilaa Dubai ka dibna la doonayo in uu isdebaro. Rooble Abdulahi Dhaloole oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Somali Refugee Victims Organisation oo ay ku mideysan yihiin Soomaalida sharci la'aanta ah ee Sweden ku nool ayaa ii sheegay in ay jiraan dhowr qof oo Sweden ay ku celisay Soomaaliya kuwaasoo la geeyay wadamada deriska ah. Wiilkaan ku xiran Flen iyo Wiil kale oo isna la xiran ayaa hada cuntada ka soomay ayagoo u baahan caawimaada dadka sharciyaqaanada ah ee Soomaaliyeed. Soo lagama yaabo in ay Soomaalidu sameyn karaan sidii Ciraaqiyiinta kuwaas oo u dacwoodey Maxkamada Xuquuqul Insaanke ee Midowdga Yurub taasoo amartay in aan dadkaas la celin. Sweden ayaa u muuqata in ay wado gadaale u soo mareyso ku celinta dadka Soomaaliya maadaama ay ceeb ku noqoneyso in ay si toos ah dadka ugu celiyaan Soomaaliya ayay u muuqataa in ay heshiis la sameeyeen wadamada deriska ah si ay isaga fogeeyaan dadka la diiday. Rooble ayaa sidoo kale ii sheegay in ay soo gaareen cabashooyin badan oo la xiriira dhibaatooyin haysta dadka sharciga ka sugaya Sweden kuwaas oo ay ka mid yihiin daryeel xumo caafimaad.
Sweden ayaa dooneysa wiil dhalinyaro ah in ay ku celiso Soomaaliya ka dib markii loo diiday sharciga degenaanshaha dalka. Wiilkaan oo hada ku xiran xabsi ku yaala magaalada Flen ayay Sweden u sheegtay in ay ku celinayaan Soomaaliya ayagoo geeynaya ilaa Dubai ka dibna la doonayo in uu isdebaro.
Rooble Abdulahi Dhaloole oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Somali Refugee Victims Organisation oo ay ku mideysan yihiin Soomaalida sharci la’aanta ah ee Sweden ku nool ayaa ii sheegay in ay jiraan dhowr qof oo Sweden ay ku celisay Soomaaliya kuwaasoo la geeyay wadamada deriska ah.
Wiilkaan ku xiran Flen iyo Wiil kale oo isna la xiran ayaa hada cuntada ka soomay ayagoo u baahan caawimaada dadka sharciyaqaanada ah ee Soomaaliyeed. Soo lagama yaabo in ay Soomaalidu sameyn karaan sidii Ciraaqiyiinta kuwaas oo u dacwoodey Maxkamada Xuquuqul Insaanke ee Midowdga Yurub taasoo amartay in aan dadkaas la celin.
Sweden ayaa u muuqata in ay wado gadaale u soo mareyso ku celinta dadka Soomaaliya maadaama ay ceeb ku noqoneyso in ay si toos ah dadka ugu celiyaan Soomaaliya ayay u muuqataa in ay heshiis la sameeyeen wadamada deriska ah si ay isaga fogeeyaan dadka la diiday.
Rooble ayaa sidoo kale ii sheegay in ay soo gaareen cabashooyin badan oo la xiriira dhibaatooyin haysta dadka sharciga ka sugaya Sweden kuwaas oo ay ka mid yihiin daryeel xumo caafimaad.
sweden somalida ayey wadnakooda ku celinoosa , qoysaska iney keenta ha ka yaabib
asc all somaliyay somali walanacay meelkst lakin illahy manacin sorry waaka xumahay wiilasha lacelina waxay ku imadeen meshaan hanti faraana iyo dhibaato marka ma ahan in laceliyo qofkastoo somalia dhibata heesato xag dhaqaale xag nabadgalo meelkasta ay joogan somali waa dad noloshooda ay tahay mid aan isla mid ahayn micnaha dadka qaarbaladan qaarba gaaja waxa somaliada waxa ku badatay intii gaajada ahayd inta kalana waa dhiigya cab kii maskiina inta imado asagana ma lacelina waaba calol xumo ween warkayga yaan ku dheran ee waxa leyahya somalia allah umaqan
asc walaal runtii waxaan aad iyo aad uga naxay ama aan kaqiiroday wiilka kuxiran falen iyo inta kale oo lamid ka ah walaal runtii waxaanu nahay qaran ay udhamatay waayo dadku dadkoda way u hadlaan wixii ay kaqabankaraana way ka sal gaaraan marka miyeysan ahayn in garyaqaanada soomaaliyeed ay udoodaan ninkaan walaalkeen aha iyo kuwa lamidka ahaba walaha soomaliyed waxaan leeyahay almuslim akhul muslim kii lasiiyo xaashida yarta ah yuu isu malayn in uu yahay xaalkiisu ok waayo inta kankalan waa helayaa insh alah walal wiilka alla ka siiyo